Guri ku shuf-beelay Dab qabsaday & Ciidamada Booliska oo ka hadlay arrintan | Somaliland.Org
June 30, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guri Qoys danyar ahi leeyihiin oo ku yaala Xaafadda Shacabka ee Magaalada Hargeysa, ayaa ku shuf-beelay, isla markaana ay baaba’day Hantidii hoos taalay, ka dib markii uu Dab qabsaday.
Gurigan oo uu leeyahay Qoys danyar ah, ayaa sida la sheegay Dab ka dhashay Korontadu uu qabsaday. Waxaana bakhtiinta Gurigan oo ay baaba’day Alaabtii hoos taalay ka qayb qaatay Laba Gaadhi oo kuwa Dab-demiska ah, Dawladda Hoose, Ciidamada Booliska iyo dadweynaha ku dhaqan Xaafaddaas. Taliyaha Ciidanka Booliska ee Saldhiga dhexe ee Hargeysa, Maxamed Ismaaciil Xirsi (Maxamed Case), ayaa Saxaafada uga waramay Gurigan gubtay, waxaanu yidhi “Gurigan dabku qabsaday waanu bakhtiinay waxaana ka hawl galay Ciidanka Booliska, Gaadiidka dab-damiska Dawlada Hoose Hargeysa iyo dadweynaha ku dhaqan xaafadan, dhammaantood si wanaagsan ayay uga qeyb galeen. Gurigaasi dabku khasaare weyn ayuu u geystay, waxaanu ku fiday labada meheradood ee ku xigay, oo iyagana xaga sare dabku ka soo gaadhay, balse aan khasaare badani soo gaadhin.” Waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Gaadhiga ugu soo horreeyay ee ka qeyb qaatay bakhtiinka dabkaasi wuxuu ahaa gaadiidka dab-damiska dawlada Hoose, waananu bakhtiinay. Laakiin, Guriga hantidii dhex taalay waxba kamay bixin oo way ku shuf beeshay,”
Taliyaha Saldhiga dhexe ee Hargeysa wuxuu ammaan u jeediyay dadweynaha ku dhaqan Xaafadaas oo uu tilmaamay inay gacan weyn ka geysteen bakhtiinka gurigaas oo uu lahaa Askari ka tirsan Booliska Somaliland. waxaanu Taliyuhu sheegay in aanay jirin khasaare Nafeed oo soo gaadhay Qoyskii ku noolaa Gurigaas.
Dhinaca kale, aabbaha Qoyskan Gurigoodu ku baaba’ay Dabka oo lagu magacaabo Aadan Ibraahim oo isna Saxaafadda la hadlay ayaa wuxuu yidhi, “Waad arkaysaan oo gurigu sidan ayuu u gubtay oo ilaahay baa keenay, waxaanse eebe uga mahad naqayaa in carruurtii iiga badbaaday. Anigu shaqada ayaan ku maqnaa, balse waxa la igu yidhi dabku wuxuu ka dhashay laydhka oo xadhkahiisu ruxmeen. Waayo, waa tan lagu jiro xiliga xagaaga ah ee dabaysha xooga badani subaxdii dhacdo”
Maaha markii ugu horraysay ee Dab noocan oo kale ahi uu baabi’iyo Guri ku yaala Magaalada Hargeysa, hase ahaatee, bishan horraanteedii ayay ahayd markii toddobaad gudihii ay Magaalada Hargeysa ku shuf beeleen ilaa 5 Guri oo ku kala yaala Xaafadaha Magaalada.